कहिलेसम्म मारमा भूकम्पपीडित ? | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार कहिलेसम्म मारमा भूकम्पपीडित ?
on: August 03, 2018 पाठक विचार
तपाईंको पत्रिकाले भूकम्पपीडितका समस्या बरोबर प्रकाशित गरेको हुँदा मेरो पनि केही गुनासो भएकाले यहाँको पत्रिकामा प्रकाशित गरिदिनुहुन अनुरोध छ । २०७२ वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पले ढुङ्गामाटोका घर गल्र्यामगुर्लुम ढले । म बसेको चित्तपोलको देउजा गाउँमा एउटा पनि घर ढलेन । कारण थियो सो गाउँ एउटै ढुङ्गाको भएकाले । घर नढले पनि बस्न नहुने गरी चर्केको छ । क्षति विवरण सङ्कलन गरी पीडितलाई राहत दिन सूर्यविनायक नगरपालिकाबाट रातो कार्ड दिइयो । मैले रातोकार्ड पाइनँ, बुझ्दा घर केही नभएकाले रातो कार्ड नदिएको जवाफ आयो । अनि मैले मेरो घरको अवस्था र रातो कार्ड पाउने घरको तुलना गरेँ । मेरो घर पूर्ण क्षति हुनुपर्ने भनी निवेदन दिएँ । क्षति संशोधन गरी मलाई रातो कार्ड दिइयो ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरी राहत वितरण गर्न लगत सङ्कलन गर्ने काम ग¥यो । सो कामका लागि स्थानीय नगरपालिकाबाट सामाजिक परिचालक र प्राधिकरणबाट सर्भेयर खटायो । २०७३/४/१३ गते मेरो घरको लगत सङ्कलन गरे । लगत सङ्कलनको ३ महीनापछि लाभग्राहीको सूची प्रकाशित भयो तर मेरो नाम समावेश भएन । वडा कार्यालयमा बुझ्दा तपार्इंको घर केही नभएकाले पूर्णक्षतिमा नपरेको जवाफ आयो । चित्त नबुझे गुनासो भर्नु भने । मैले २०७३/८/१० गते गुनासो दर्ता गराएँ । पुनः लगत लिन आएँ । लगत सङ्कलनमा आएका नगरपालिकाको कर्मचारी पहिलेकै थिए । पहिले लगत सङ्कलन गर्दा कुनै पार्टीका स्थानीय नेता सर्भेयरसँगसँगै हिँडेका र उनले भनेअनुसार तथ्याङ्कमा केरमेट गरेको भन्ने हल्ला पहिले नै सुनेको थिएँ । गलत तथ्याङ्क दिएकाले मेरो नाम लाभग्राही सूचीमा नपरेको मेरो अनुमान सही भयो । किनभने, घरको एउटा इँटासमेत नखसेका आप्mना मान्छेको घर भने पूर्णक्षति हुने । आफ्नो मान्छे भएकैले दुईदुईओटा ढलान घर भए पनि लाभग्राही सूचीमा नाम आउने, भएको एउटा ढलान घर केही भएको छैन त्यस्ताको पनि नाम आउने, एउटै परिवारको बाजे, बुबा र आफ्नो तीनपुस्तेको नाम समावेश हुने, २०७३ सालमा मात्र छुटी भिन्न बसेकाहरूको पनि लाभग्राहीमा नाम आउने आदि घटना पक्षपात र अधिकारको दुरुपयोग भएको स्पष्ट भयो । कर्मचारीले सत्तापक्षका नेताले भनेको भरमा तथ्याङ्क तोडमोड गरेको इँटा माटोको घर बस्न नहुने भयो भने पूर्णक्षतिको विवरणमा थप पीडा भयो । सत्ताका ती नेता र कर्मचारीलाई पनि कारबाही हुँदैन ? भूकम्पपीडितका लागि आएको राहत गैरपीडितलाई वितरण गरेको समाचार आउने गरेको छ । फेरि रेडक्रसजस्तो ‘पवित्र संस्था’ भन्नेले पनि राहत वितरण गर्दा जो आर्थिक रूपमा कमजोर छ, उसलाई नदिएको र आफ्ना सदस्य भएकैले राहत दिएको थियो । यस्तो पक्षपातविरुद्ध कहाँ उजुरी दिने ? फेरि निमुखाको उजुरी पनि लाग्दैन । यहाँ त शासक दलका नेताहरूकै हालिमुहाली छ । सरकारी पार्टीका नेताहरूको नारा भूकम्पपीडित सबैको घर बनाइदिने भनी भट्याए, व्यवहार भने उनै भूकम्पपीडितलाई आएको राहतमा अनियमितता गर्ने ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा मैले गुनासो गर्दै रहे । २०७४/४/१३ गते एकजना सर्भेयरसहित नगरपालिकाको उनै कर्मचारी आए । घरको फोटो र विवरण लिए । प्रतिवेदन कहाँ बुझायो थाहा भएन । २२ दिनपछि सर्भेका लागि भनेर अर्को टोली आयो । पुनः फोटो र विवरण भरे । २०७५/३/१४ गते प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूची प्रकाशित गर्‍यो । त्यसमा मेरो नाम समावेश भयो । यसको कारण दुई पटकसम्म नगरपालिकाको कर्मचारीले लिएको लगतमा मेरो नाम नपरेको र अर्को टोलीले लिनासाथ प¥यो । सूचीरे केही दिनपछि बुझ्दा थाहा भयो । प्रबलीकरण गर्ने सूचीमा पो मेरो नाम प¥यो ।
मैले एक छिन सोचेँ । साँच्ची मेरो घर कति बलियोसँग बनाएको होला त ! तीन/तीनजना सर्भेयरले निरीक्षण गर्दा पनि पूर्णक्षतिमा नपरेको बरु टालटुल गरेर बस्न मिल्ने घर भनि प्रमाणित भएको हुँदा मैले घर बनाउने डकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिने विचार गरेँ । एकै छिनपछि मेरो मन फेरियो । घरको चारैतीर गाह्रो भएको घर त भूकम्पले ढलेका छन् भने मेरो घरको त पूर्वतिर छिमेकीको गाह्रोमा जोडिएर पो बसेको छ । उसले घर भत्काउने बेलामा मेरो घर त ह्वाङ्गैै हुने भयो । पूर्वतर्फको गाह्रो जगैदेखि बनाउनु पर्ने भएर नै त मर्मत गर्न पैसा दिन खोजेको होला प्राधिकरणले । फेरि २०३९ सालमा भएको भीषण आगलागीपछि २०४० सालमा बनेको सो घरमा आगलागीपीडितलाई सल्लाघारी वनले दिएको सल्लाको केही काठ र आफ्नै बारीको उत्तिसका काठ किराले खाइसकेको छ । घरको दलिन, थाम र निदाल फेर्न पर्ने भएकाले पनि फेरेर बस्नु भनेको होला । ललितपुरको हरिसिद्धिमा बनेको टायलको छानो गह्रौं भएकाले अब हलुका जस्तापाता राख्नु भनेको होला । फेरि आफ्नै बारीमा बनाएको इँटा लोकल भट्टामा मतिकोइलाले पोलेको इँटा बाहिर र भित्र बारीकै काँचो इँटाले बनाएको घरको गाह्रो बरोबरको पराकम्पनले हल्लाइसकेको छ । पोलेको इँटा र काँचो इँटा फुटेर गाह्रोको बीचमा छुटिसकेकाले सो गाह्रो पनि मर्मत गर्नै प¥यो नि ?
प्राधिकरणले भनेको प्रबलीकरणको परिभाषामा मेरो घर पर्छ कि पर्दैन भनेर केही प्राविधिकसँग सोध्दा मलाई गाली गरे । यस्तो घर कसरी प्रबलीकरण हुन्छ । पूरै भत्काउनुपर्ने घर पनि मर्मत गर्न सकिन्छ ? यस्तो जवाफ आएपछि प्राधिकरणको जिल्ला कार्यालयमा जाँदा तपाईंहरू जस्तालाई पुनरावेदन दिने मौका अहिले दिएकै होइन भने । कस्तालाई दिएको त भनी सोध्दा गैरलाभग्राहीको सूचीमा समावेश भएकाहरूलाई मौका दिएको भने । गैरलाभग्राही भनेको के भन्दा कहीँकतै नाम समावेश नभएका भने । त्यसो भने मेरा भाइको पनि नाम निस्केको छैन भन्दा कर्मचारीले हेरे र भने उसको नाम त पहिले नै प्राबलीकरणको लिस्टमा समावेश छ, वडा कार्यालय जानू भने । तर, जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उजुरी गर्ने भन्ने सल्लाह दियो । पुनरावेदन गर्न प्राधिकरणमा गयो भने वडामा पठाउने र वडाले प्राधिकरणलाई देखाउने । यो लुकामारीले भूकम्पपीडितलाई सरकारले कहिलेसम्म सताउने हो ! यही भएर तपाईको पत्रिकाको सहारा लिन आएको छु । भूकम्पपीडितको नाममा आएको रकम विदेश भ्रमण, सभा, गोष्ठी, तलबभत्ता र गाडी चढ्नमै खर्च गर्ने यी सरकारी दलका नेता र कर्मचारीलाई जनतासमक्ष नाङ्गेझार पार्नुपर्‍यो । भूकम्पपीडितका नाममा आएको रकम अनियमितता गर्ने नेता र कर्मचारी कोको हुन् पत्रिकामार्फत जानकारी दिनुपर्‍यो । भूकम्पपीडितलाई समयमै राहत नदिई पटकपटक दुःख दिने नेता र कर्मचारी कोको हुन् ? छानबिन गर्न जनस्तरमा आयोग बनाउनुप¥यो । पूर्वाग्रही भएर मलाई जस्तै धेरै पीडितलाई दुःख दिइरहेका छन्, तिनीहरूको सूची बनाएर कारबाही गर्ने बेला आएको छ । देश र जनतामा समर्पित तपार्इंको पत्रिकाले पीडितको आवाज जनसमक्ष पुर्‍याउने आशा गर्दछु । धन्यवाद ।